Yahuuda oo Cuuriyaamisay Shaqooyinka iyo Mustaqbalka Dhaqaale Ee Reer Falastiin. – Shabakadda Amiirnuur
Maxaa Cusub, Wararka Dibadda
December 28, 2019 4:50 am by admin Views: 136
Dr.Cabdiraxmaan Abu Rukba ayaa sharraxay xaaladdiisa ku dhawaad 7 sano kadib markii uu qaatay shahaadada jaamacadeed ee taariikhda casriga isagoo aan shaqo ka helin Gaza.
Markii uu ka qalin jabiyay Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee Qaahira sanadkii 2012, wuxuu rajeynayay inuu ku heli doono jidkiisa qeybta waxbarashada jaamacadda, laakiin wuxuu la kulmay xaqiiqda qaraar ee marinka Qaza iyadoo ay ugu wacan tahay xayiraadii Yahuuda.
Abu Rukba ayaa u sheegay Al Jazeera Net: “Jaamacadaha ku yaal Qaza badankood waxay la dhibaatoonayaan dhaqaale taasoo niyad jab ku keenta ardayda.
In kasta oo Abu Rukba (36 sano) ku qancay shaqo ku meelgaar ah, iyo in lagu taageero qoyskiisa xaaskiisa iyo afarta caruur ah, haddana howshan ma aysan soconin muddo dheer, wuxuuna u dhexeeyey dhowr jaamacadood.
Shaqo la’aanta Gaza kuma koobna dadka xirfadleyda ah iyo dadka aan aqoonta laheyn.
Tirakoob dhowaan laga sameeyay Xarunta Dhexe ee Tirakoobka Falastiiniyiinta ayaa ku qiyaastay heerka shaqo la aanta ee dhammaan akadeemiyada haatan lagu baray machadyada tacliinta sare ee Falastiin qiyaastii 58% illaa (40% ee Daanta Galbeed iyo 77% marinka Qaza).
Xaqiiqadan adag ee jirta ayaa jahwareerisay Abu Rukba, oo waxay ka dhigtay inuu awoodi waayey inuu ka fikiro noloshiisa iyo mustaqbalkiisa, sidaa darteed wuxuu diirada saaray daawashada horyaalada kubada cagta ee carbeed iyo ciyaaraha fiidiyowga, waana sidii ay la rabeen Yahuuda cunaqabateynta iyo dhibaatada shaqa la’aanta ah abuuray.
Dawee oo baro
Xanuun iyo murugo weyn, Abuu Rukba wuxuu xasuustaa waayo-aragnimadii sideedii sano ee uu ku qaatay bannaanka Qasa isagoo ujeeddadiisu ahayd daaweynta dhaawacyada culus ee ka soo gaadhay gantaal ay Yahuudu kasoo rideen diyaarad dagaal sannadkii 2004tii isagoo taagan gurigiisa hortiisa xerada qaxootiga ee Jabalia ee waqooyiga Gaza.
Shaqo la”aanta iyo dhaqaala darrida ka jirta dhulka la heysto ee Flaastiin ayaanan ahayn mid lasoo koobi karo.
Al-Khudari oo isna ah muslim Filistiini ah ayaa u sheegay warbaahinta carabta in ay jiraan rubuc malyuun dad ah oo shaqo la’aan ku ah Gaza, waqti ay jaamacadaha ka qalin-jabiyaan sannad walba qiyaastii 10 kun oo ka socda takhasusyo kala duwan, kuwaas oo u tartamaya ilaa 100 fursadood oo shaqo oo keliya.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in go’doominta, oo la kordhiyay ay curyaamis dhammaan dhinacyada nolosha ee Gaza, uuna gebi ahaanba albaabka u xiray in la helo fursado shaqo oo cusub.
Siyaasadda Yahuuda u dajisay Falastiin iyo wadamo badan oo ay duullaan ku heyso ayaa ah in dadka lagu mashquuliyo noloshooda islamarkaana lagala wareego ilaha dhaqaalaha si aysanba u tabin in wadankooda la heysto oo ay aroor walbaahi kusoo toosaan maanta maxaad cuntaa.